Riyaha Qabuuraha Washington
Damale-Xagare, 7 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
58 riyo ah ayaa waxa kireystay maamulka xabaalaha congresska ee Washington DC ku yaala. How malayn in caano iyo hilib darteed loo kireystay riyaha. Waxaa loo kireystay inay daaqaan dhirta iyo cowska ka buuxsamay xabaalaha. Riyahaa waxa laga bixiyey 4000 kun oo doolar iyo inay todoba maalmood daaqaan dhirta qarisay xabaalaha.
Waa arin wanaagsan oo nooga jaban inaan kiraysano mishiino geedaha jara, kuwaas oo aan gaari karin meelaha cidhiidhka ah, ridii waxaan ku kireysanay 25 cents saacadii sidaa waxa yiri Paul Williams oo madax ka ah xabaalahaas. Ninka iska leh riyahaa ayaa sheegay inaanu riyihiisa kireyn karin ilaa bisha May, waayo balamo badan ayaan haystaa inta ka horeysa bisha May.
Mr.Paul wuxuu sheegay in markii ay yimaadeen shaqaalaha geedaha cunaya (riyaha) uu aad ugu farxay waayo ma hubin in aan heleyno iyadoo dad badani ay door bidaan inay riyo kireystaan halkii ay mushiin kireysan lahaayeen sababo badan darteed.
Waxaa iyana la yaab leh xabaalahan oo ku yaala bartamaha magaalada Washington DC inay dhibaato noqotay sidii riyahan loo keeni lahaa xabaalaha, maadama sharciga magaaladaas aanu ogoleyn in xoolo nool ay ku nooladaan Washington. Riyahan oo habeen iyo maalinba daaqi doona ayaa weliba waxaa loogu darayaa lacag.